गर्मीमा आँखालाई कसरी स्वस्थ राख्ने... :: डा. सञ्जीता शर्मा :: Setopati
डा. सञ्जीता शर्मा आँखा रोग विशेषज्ञ
आँखा हाम्रो शरीरको महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील अंग हो। आँखाकै कारण संसार देखिने भएकोले शरीरका अन्य अंगमध्ये यसको अझै बढी महत्त्व छ। आँखामा विभिन्न खाले समस्याहरू देखापर्छन्। त्यसमा पनि गर्मीको समयमा आँखामा बढी समस्या देखा पर्छ। गर्मीमा आँखा पाक्ने, चिलाउने र आखा पोल्ने समस्याले बढी सताउँछ।
शरीरको ‘इम्युन सिस्टमले’ व्याक्टेरियासँग र संक्रमण हुन सक्ने किटाणुसँग लड्न सक्ने क्षमता कम भयो भने संक्रमण देखिन्छ। आँखा पाक्ने रोग सरूवा रोगको रूपमा देखिन्छ। आँखा पाकेको व्यक्तिलाई हेरेर यो रोग सर्ने होइन। आँखामा संक्रमण भएको बिरामीको आँखाको आँसुबाट सुरू भएर अरूलाई सर्ने हुन्छ। बिरामीले छोएको सामानबाट र रुमालबाट बढी सर्छ।
बिरामीलाई सुरूमा आँखामा अफ्ठयारोपनको महशुस हुन्छ।
आँखामा रातोपन हुन्छ ।
रातोपनसँगै आँखाबाट चिप्रा आउने समस्या हुन्छ।
आँखाको वरिपरिको ढकनी सुन्निन्छ।
उज्यालोमा हेर्न गाह्रो हुन्छ ।
आँखामा समस्या आएपछि सुरूमा उपचारको लागि चिकित्सककहाँ नै जानुपर्छ। आँखामा जथाभावी औषधि हाल्नु हुँदैन। आँखालाई असर नहुने औषधिहरू हुन्छन् त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ। उपचारको लागि नेत्र विशेषज्ञकहाँनै जानुपर्छ। बिरामीले पनि आफ्नो उपचारका लागि पहल गर्नुपर्छ। आँखाको सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ।
आँखाको संक्रमणमा धेरै देखिने समस्या भनेको कडा खालको औषधिले गर्दा हुन्छ। चिकित्सकलाई नजचाइकन औषधि राख्दा आँखामा फुलो पर्ने खतरा हुन्छ। कडा खालको किटाणुको संक्रमण भएमा त्यो अवस्थामा पनि फुलो पर्ने र कालान्तरमा दृष्टि नै गुम्ने खतरा हुन्छ। आँखाको नानीमा असर गर्छ र आँखामा दाग देखिने हुन्छ। जसले गर्दा दूरदृष्टिमा असर गर्छ।
त्यसैले आँखा धुने, आँखालाई सफा गर्ने काम गर्नुपर्छ। गर्मीमा यो समस्या अझै बढी हुन्छ। फागुन चैतदेखि साउन भदौसम्म आँखा पाक्ने समस्या हुन्छ।
आँखा चिलाउने एउटा एलर्जी नै हो। यो के कारणले भएको हो भन्ने पत्ता लगाउन विशेष किसिमले परीक्षणनै गर्नुपर्छ। तर हामीले हेर्दा धूँवा–धुलो अनि घामको कारणले पनि आँखा चिलाउँछ। गर्मी र धेरै हावा चल्ने मौसममा नै आँखा चिलाउने समस्या हुन्छ।
आँखा चिलाउँदा आँखा रातो हुने, आँखामा आँसु आउने लगायतका समस्या देखा पर्छन्। कोही बिरामीको आँखाको सेतो भागलाई पहेंलोसमेत भएको हुन्छ। यसको उपचारको लागि आँखामा एलर्जी नै हो भन्ने भयो भने एलर्जी विरूद्धको औषधि खुवाउनुपर्छ। यसको औषधि अलि लामो समय पनि खानुपर्ने हुन्छ। चिसो महिना र पानी पर्न थालेपछि भने अलि कम हुन्छ। त्यो बेलामा औषधिलाई कम गर्दै लैजानुपर्छ।
एलर्जीबाट जोगिन बाहिर धुलोमा हिँड्दा चश्मा लगाउनुपर्छ। आँखाको सुरक्षा गर्नुपर्छ। आइसले आँखा सेक्नुपर्छ । यसले आँखालाई फाइदा गर्छ। त्यो बाहेक आँखामा आँसुको काम गर्ने औषधि पनि हाल्नुपर्छ ।
आँखामा आँसुको मात्रा कमी भएर आँखालाई गाह्रो हुन्छ जसले गर्दा आँखा पोल्ने समस्या उत्पन्न हुन्छ। आँखामा आँसुको कमी भयो भने औषधिमार्फत् आँसु थप्नुपर्छ। धेरैनै आँसुको मात्रा कम छ भने दिने औषधि र आँसुको मात्रा कम भएको बेलामा दिने औषधिमा फरक हुन्छ। आँखा पोल्ने अन्य समस्याले पनि हुन्छ। अनिन्द्राको कारणले पनि आँखा पोल्छ। यस्तो भएको पनि आँखामा आँसुको मात्रा कम भएर हो। आँखा पोल्ने समस्या भएको व्यक्ति पनि धुलो र घामबाट जोगिनुपर्छ।
यसको लागि आइसले सेक्यो भने फाइदा हुन्छ। यसको साथै चश्मा पनि लगाउनुपर्छ। ओपिडीमा आउने बिरामीको समस्या हेर्दा ८० प्रतिशत आँखा पोल्ने चिलाउने निन्द्रा नलाग्ने थकान जस्तो भयो भन्ने गरेका हुन्छन्। यो सबै आँखा सुख्खा भएर नै हो। काठमाडौंको धूँवा धुलोको कारणले यस्तो समस्या उत्पन्न हुन्छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ३२, २०७६, ११:४८:००